2010 – Year – Channel Myanmar
Firebreather (2010) Firebreather (2010)ဒီ animation ဇာတ်ကားကောင်းလေးကို မသိတဲ့သူတော်တော်ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ကလေးဘ၀မှာ အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။မကြည့်ဖူးသေးတဲ့သူတွေရော ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေပါ ဘာသာပြန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ သေချာပြန်လည်ခံစားလို့ရအောင်လို့ Channel Myanmar ကနေ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးအနေနဲ့ကတော့......ကမ္ဘာကြီးဟာ ကိုင်ဂျူးလို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမသတ္တဝါကြီးတွေနဲ့ လူသားတွေ ရောထွေးနေထိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ မျိုးနွယ်နှစ်ခုကြား စစ်ပွဲရှည်ကြီး တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဒီစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာကတော့ မားဂရက်ဆိုတဲ့ လူသားမျိုးနွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ ကိုင်ဂျူးဘုရင်ကြီး ဘယ်လော့ခ် တို့ရဲ့ ချစ်ကြိုက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကြီးရပ်တန့်သွားပြီးနောက် ကိုင်ဂျူးတွေဆိုတာလည်း ဒဏ္ဍာရီသဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒန်ကန်ဆိုတဲ့ ကိုင်ဂျူးတစ်၀က် လူသားတစ်၀က် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးကတော့ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကိုင်ဂျူးတစ်ကောင်ရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ လူသားလေး ဒန်ကန်ဆီကို တစ်ရက်မှာ ကိုင်ဂျူးဘုရင် ဘယ်လော့ခ်ကြီးက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့...... (ဇာတ်ကားနဲ့ အညွှန်းကို Chuck Chuck မှ ပြန်ဆိုရေးသားထားပါတယ်)Size - 1.3GB, 608MB Quality - ...
Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 1 (2010) Harry Potter (2001-2011)Platform 9¾ ကနေ ပြန်လည် ကြိုဆိုပါတယ်။ Hogwarts ရထားကြီးနဲ့ wizarding world ကို အလည်တစ်ခေါက် ထပ်သွားပြီး Chapter တစ်ခုချင်းစီကို အစဉ်လိုက် ပြန်အလွမ်းသည်ကြမယ်ဗျာ ...ခင်ဗျားက muggle မဟုတ်ရင်တော့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူ ကောင်လေးအကြောင်း ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ ... သူ့နာမည်က Harry Potter တဲ့ .. ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားဆို နဖူးမှာ အမာရွတ်လေးနဲ့ မှန်ကြောင်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါပေါ့ ။ဒီ အမာရွတ်လေး ရခဲ့တဲ့ ညကနေ စလို့ သူဟာ သူကိုယ်တိုင် မသိပါဘဲ မှော်လောကမှာ ကျော်ကြားလာခဲ့တယ်... မနာခံသူ မှန်သမျှ အရှင်မထားတတ်တဲ့ မှော်ဆရာကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ လက်က လွတ်မြောက်ခဲ့သူအဖြစ်ပေါ့... မှော်ဆရာကြီးက ဘယ်သူလဲတော့ လာမမေးပါနဲ့ ... ကျွန်တော်တို့ သူ့နာမည်ကို ထုတ်မပြောကြဘူး ...သိုပေမဲ့ Harry Potter ဆိုတဲ့ မှော်ဆရာလေးကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်မွေးပြီး ရွန်၊ ဟာမွိုင်နီဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ...
Tooth Fairy (2010) Tooth Fairy (2010)လူသားဆန်ပစ်လိုက်ဆိုတဲ့ဘိုးတော် Viral ဖြစ်သွားတော့ ဒီဘဲ ဝါဒီကိုအတော်များများကသဘောကျကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ သဘောလည်းကျချင်စရာပဲ လက်တွေ့ဆန်တာကိုးဗျ။ လူသားဆန်ပစ်လိုက်ဆိုတဲ့ ဘဲကဘယ်နှခုနှစ်ကပြောလဲမသိပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒဝိန်းဂျွန်ဆင်ကြီးကတော့ ၂၀၁၀ ထဲက လူသားဆန်နေတာပါ။ဒဲရစ် သွန်မဆင်ဆိုတဲ့ ဟော့ကီးသမားကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ သွားနတ်သားလို့နာမည်ပြောင်ရထားပြီး fantasy တွေကိုလည်း bullshit လို့တွေးထားသူတစ်ယောက်ပါ၊ ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်း ကျွန်တော်က နာမည်ကြီး ဟော့ကီးကစားသမားဖြစ်ချင်တာဗျဆိုရင် မင်းထက်တော်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်၊ ဘဝမှာအများကြီးမျှော်လင့်မထားနဲ့ ဆိုပြီး ပြောတတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့။ဒီလို ဘုလကန့်ဂွစာလူ၊ Fantasy တွေကိုမယုံတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဆိုပြီး ဆင့်ခေါ်စာရောက်လာခဲ့ပါတယ်၊ fantasy တွေကိုမယုံတဲ့သူ့ခမျာ Fantasy Land ဖြစ်တဲ့နတ်သူငယ်တိုင်းပြည်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။Family/Comedy ကားဖြစ်ပြီးတော့ အိပ်မက်တွေကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ အတွေးသပ်သပ်ဖြစ်ပြီး ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြထားတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။Keep Dreaming! လူသားဆန်ပါ။ လူသားဆိုတာ အိပ်မက်တွေနဲ့ကင်းလို့မရနိုင်ပါ...။(ဇာတ်ကားနဲ့အညွှန်းကို ပြန်ဆိုရေးသားပေးထားသူကတော့ Murphy ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)Size - 1.6GB, 910MB Quality ...
Guzaarish(2010) Guzaarish (2010) **********************ဒိဇာတ်ကားလေးကတော့ IMdb rating 7.5အထိ ရရှိထားပြီးရီတစ်ရောင်ရှန်၊ အက်ရှဝါးရယားရွိုင်နဲ့ အဒိစ်တယာရွိုင်တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Romance / Dramaအမျိုးအစားဘောလိဝုဒ် ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း------------------------------------အီသန်ဟာ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး မျက်လှည့်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးမျက်လှည့်ပြပွဲတစ်ခုတွင် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာခြေလက်နှစ်ဖက်စလုံး ‌အကြောသေသွားခဲ့ပါတယ်။သူအကြောသေပြီး ၁၄နှစ်အကြာမှာရောဂါအခြေအနေတွေဟာ တဖြည်းတဖြည်းထပ်မံဆိုးဝါးလာတာကြောင့် သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှေ့နေဒေ့(ဗ်)ယာနီ ဒတ္တာကို အကူအညီတစ်ခုတောင်းပါတယ်။အီသန်တောင်းတဲ့ အကူအညီကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အတွက် ယူသနေးရှားဆိုတဲ့ ညှင်သာစွာ ဇီဝိန်ခြွေခွင့်ရဖို့တရားရုံးမှာ အသနားခံစာ တင်ခိုင်းတာပါ။ဘာသာပြန်သူကတော့ Thaik Sanပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ File size…2.04GB / 1.21GB Quality…1080o HEVC 5.1CH / 720p Format…Mp4 Duration….2h 6mins Subtitle….Myanmar Subtitle (Hard Sub) Encoder….YK Translated by Thaik San
I Saw the Devil (2010) ကိုရီးယား မင်းသား လီဗျောင်ဟွန်း နဲ့ မင်းသားကြီး Choi Min‑sik တို့အဓိကအားပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Crime, Drama, Horror အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။IMDb Rating(7.8/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (80%) ထိ ရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့....Special Agent တယောက် –လက်ထပ်တော့မယ် သူ့ချစ်သူ ကို ရက်ရက်စက်စက် တစစီခုတ်ထစ်စွန့်ပစ်ထားတာကို မြင်ခဲ့ပြီးနောက် –ချစ်သူရဲ့ အဖေ က ရဲအရာရှိ –သူ့သမီးကို သတ်သွားတဲ့သူကို မင်း ရအောင်သာရှာ …. ငါ ဘာလုပ်ပေးရ ပေးရ –Special Agent ဟာ ၂ ပါတ်တိတိ ခွင့်ယူပြီး –မသင်္ကာစရာ လူ ၄ ယောက်ကို တယောက်ချင်းစီ စစ်ရင်းမှလူသတ်သမားအစစ် ကို တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ကလဲ့စားချေမယ်ဆိုတာ –အချိန် ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိရက်စက်မယ်ဆိုတာ– – ...
The Expendables (2010) The Expendables ဟာ လူတိုင်းနီးပါးကြည့်ပြီးသား ကြိုက်ပြီးသားကားဆိုပေမယ့်ဆရာကြီး Sylvester Stallone ကတော့ သိပ်ကျေနပ်ပုံမရပါဘူး။အဲဒါနဲ့ပဲ ပိုပြီးပြည့်စုံခမ်းနားသွားမယ့် The Expendables Director's Cut ဆိုတာကို ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးများပြီး အပျော်ကြည့် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားအနေနဲ့ကြည့်ရှုသူများပြားခဲ့တဲ့ The Expendables ရဲ့ Director's Cut မှာထူးခြားသွားတာက Character တွေကို ပိုပြီး အလေးပေးဖော်ပြထားတယ်၊ရုပ်ထွက်တွေ၊ အသံတွေ အရင်မူရင်းဗားရှင်းထက် ပိုပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသလိုကြည့်ရတာကလည်း ပိုပြီး ချော့မွေ့သွားတယ်လို့ ခံစားရလိမ့်မယ်။ဇာတ်လမ်းက နည်းနည်းလေး ပိုရှည်သယောင်ယောင်ဖြစ်နေရတာကလည်းဒိုင်ယာလော့တွေ၊ ဇာတ်ကွက်တွေကို ပိုပြီး အချိန်ပေးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အရင်က ကြည့်ရ ထောက်နေတာတွေ၊ ဟာ​နေတဲ့ ဇာတ်ကွက်​တွေနာမည်ကြီးမင်းသားတွေရဲ့ Screen Time နည်းတာတွေက ဒီဗားရှင်းမှာဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ ယခင်ဗားရှင်းထက် အနည်းငယ်ထူးခြားသွားတာကိုတော့ ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲ အဖြေရှာကြပါလို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။ Quality__1080p IMDb Rating__6.5/10 Format__mp4 Duration__1h43min Type__Action, Adventure, Thriller Subtitle__Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by ...
Gantz(2010) GantZ (2010)--------------------------၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ Animeအဖြစ်ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ ဂန့်ဇ်ဆိုတဲ့စီးရီးဟာ လူငယ်တွေကြား အတော်လေးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်.၂၀၁၀ခုနှစ်မှာတော့ ဂန့်ဇ်ဟာ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ၂၀၁၁မှာ ဂန့်ဇ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်အဖြစ်Perfect Answerကို ပြသခဲ့တဲ့အပြင် Another Gantzဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တခုကိုပါဆက်စပ်ထုတ်ဝေပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၆မှာတော့ GantZ Oဆိုတဲ့ Animationရုပ်ရှင်တခုကိုပါရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ် .............ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ---------------------- ကာတိုက တနေ့ ရထားဘူတာမှာ လူတစ်ယောက်ရထားလမ်းပေါ်ကို ပြုတ်ကျနေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်ရင်း ကာ့တိုကို ကူညီတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ခဲအိပါ ရထားတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်......ပုံမှန်ဆို သူတို့နှစ်ဦးဟာ သေဆုံးရမှာဆိုပေမယ့်သေရမယ့်အစား အခန်းငယ်တခုထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်...အခန်းထဲမှာလဲ သူတို့လိုဘဝတူလူတချို့ရှိနေပြီး ထူးဆန်းတဲ့စက်ဝန်းပုံ အလုံးတလုံးပါ အတူရှိနေပါတယ်....သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီစက်လုံးကနေ သူတို့ကို မစ်ရှင်တခုခိုင်းခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒီမစ်ရှင်ကတော့ သူတို့ကို ကမ္ဘာပေါ်ရဲ့နေရာတခုက ဂြိုလ်သားတကောင်ကိုသတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီး သတ်နိုင်တဲ့လူကို အမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...သူတို့တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ မစ်ရှင်တခုကို တူတူလုပ်ကြရင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လဲ ဇာတ်အိမ်ဆောက်ထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့၂၀၁၀လောက်က Effectတွေဟာလဲ မညံ့ကြောင်းမြင်ရမှာပါ...ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ Channel MyanmarကနေGantzရဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကားလုံးကို Qualityအကောင်းဆုံးနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် File size…1.96GB Quality…BluRay ...
Colorful (2010) Colorful LifeCM fan များကို အလွန်စွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ anime ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Otaku တွေဆိုရင်တော့ ဒီကားလေးကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါကြည့်ဖူးကြမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘဲဘ၀ရဲ့အနှစ်သာရကိုဖော်ညွှန်းပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးမို့ ဒီလိုကာလကြီးမှာ မဖြစ်မနေကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းလေးလဲဆိုရင်.....မာကိုတိုဟာ သာမန်အလယ်တန်းကျောင်းသားလေး ဆိုပေမဲ့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို အလူးအလဲခံစားနေရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ မိသားစုအရေးမှာဖြစ်ဖြစ် အချစ်ရေးမှာဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်ဖြစ် အနှုတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့ ကောင်လေးပေါ့ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့ လုံးဝယုံချင်စရာမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံရပြီးနောက်နေ့မှာ သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ သေဆုံးတော့မယ့် မာကိုတို နေရာမှာ ဆိုးရွားသောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည်မွေးဖွားခွင့်မရှိတော့တဲ့ တခြားဝိညာဥ်တစ်ခုကို အစားထိုးဖို့ ဘုရားသခင်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ် အဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုအောင်မြင်ရင် ပြန်လည်မွေးဖွားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၆လအတွင်း မအောင်မြင်ရင်တော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ် တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် မာကိုတိုဟာ အပြီးတိုင်သေဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ စမ်းသပ်ချက်ဆိုတာ ဘာကိုစမ်းသပ်မှာလဲ မာကိုတိုရဲ့ ဝိညာဥ်ကရော ဘယ်ရောက်သွားမှာလဲ မာကိုတိုမသေဆုံးမှီက မြင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကရော ဘာဖြစ်မလဲ စတဲ့စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို အစားထိုးဝိညာဥ်လေးနဲ့အတူ အဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ကြည်နူးဖို့လည်းကောင်းတယ် အဲ့လိုပဲ ဝမ်းနည်းဖို့လည်းကောင်းနေတယ် ဇာတ်လမ်းပြီးတာနဲ့ လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အမြင်က တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားမှာပါ တကယ့်ကိုအချိန်ပေးကြည့်ရတာနဲ့ ထိုက်တန်လွန်းလှတဲ့ anime ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Thet Hnin Hsu ပါ Translated by : Thet Hin HsuEncoded by : YKFile ...
She’s Out of My League (2010) She's Out of My League (2010) IMDb - 6.4/10_____Rotten - 58%ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယ်အချစ်ဟာသဇာတ်ကားလေးပါ။ အချစ်ကို အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ တိုင်းတာတွက်ချက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ရိုးသားတဲ့အချစ်အကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး အချစ်မှာ နားလည်မှုသာ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ အလွန်သဘောမနောကောင်းတဲ့ကောင်လေးနဲ့ အလွန်လန်းတဲ့ကောင်မလေးတို့ဇာတ်လမ်းကို အလွန်ဘော်ဒါပီသတဲ့ဇာတ်ပို့တွေနဲ့ ရသစုံအောင် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ အပန်းဖြေကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Comedy ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ IMDb Rating(6.4/10) ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ File size…(2.3 GB) and (1.2 GB) Quality….BluRay 1080p and 720p 5.1CH Format…mp4 Duration….01:44:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
Easy A (2010) IMDb Rating (7.1) / Rotten Tomotes (85%)ဘဝမှာ ကောလဟာလကြောင့် အချောင်နာမည်ကြီးနေတတ်တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်...ကောင်းတဲ့ဖက်ကနာမည်ကြီးတာတော့ ရှားတတ်ပါတယ်...များသောအားဖြင့် မကောင်းတဲ့ဖက်မှာနာမည်ကြီးနေတာမျိုးပေါ့...ဘာလို့လဲဆို လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုပြီး မြိန်ရည်ရှက်ရည် နှိမ်ချင်ကြလို့ပါပဲ..ဂွေးတိုလေး...စနှိုက်ကြော်..ကက...စောက်ပေါလေး...ရုပ်ဆိုးမ...သွားခေါကောင်..ထိပ်ပြောင်....ငမွဲလေးတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့...မိမိရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တခြားသူတွေက ကြည့်ပြီး အပုပ်ချဆုံးဖြတ်နေကြတာ ခံရခက်ပါတယ်...ဒီလိုလူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေအကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားမှာ သရော်ထားပါတယ်...ဇာတ်ကားအဆုံးသတ်မှာပြောသွားတဲ့စကားလေးက ထိမိလွန်းပါတယ်။" ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို သူ့ကိုပေးရင် ပေးတော့မှာ..ဘယ်တော့လဲဆိုတာတော့ မသိဘူးနောက်၅မိနစ် နေရင်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် နောက် ၆လ ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာဦးညကျရင်ပေါ့ ..ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာ ကောင်းတာက အဲဒါ...ရှင်တို့အလုပ် မဟုတ်လို့ပဲ။ "ဒီဇာတ်ကားဟာ မင်းသမီး Emma Stone ရဲ့ မှတ်တိုင်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီး Budget $8 million သာကုန်ကျခဲ့ပေမယ့်Box Office မှာ $75 million ရရှိတဲ့အထိ အနုပညာအရရော စီးပွားရေးအရပါ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။Teen School ...
Megamind (2010) Megamindရုပ်ရှင်ကားက ကျွန်တော်တို့အကုန်သိကြတဲ့ Dreamworks Creationတွေထဲက အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Dreamworks Studioက Shrekဆိုတဲ့ အကောင်းဆုံး animationကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သလို ဒုတိယအနေနဲ့ဆို Kung Fu Pandaကို ညွှန်ပေးရပါမယ်။ Dreamworksက ရုပ်ရှင်ကားတွေတော်တော်များများက storylineတွေကောင်းသလို ကြည့်ပြီးရင် ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ကြည့်ချင်အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ဗျ။ Animationsတော်တော်များများထဲမှ Dreamworksကထုတ်တဲ့ Megamindဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားက 2010မှာထွက်လာခဲ့ပြီး.. တော်တော်လည်းပေါက်ခဲ့တာပါ။ အကြောင်းကတော့ Dc/Marvelဆိုတဲ့ Universe၂ခုမှာရှိကြတဲ့ Comicsထဲက အကြောင်းအရာတချို့ကို What if storyအနေနဲ့ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကားက ကြည့်ရင်ကြည့်သလို အခုနောက်ပိုင်းထွက်ရှိနေတဲ့ MCUဇာတ်ကားထဲက Technologyတွေနဲ့ပိုဆင်တူလာသလို... သတိထားမိရင်ထားမိသလို Factsတော်တော်များများက Superheros Comicsတွေထဲက ဆွဲထုတ်ယူထားမှန်း သိသာလာစေပါတယ်။ နောက်ထပ်ရော ဘယ်လိုTheoryတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတော်တော်များများ ပါသလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်မှာဆက်လက်ရှုစားကြည့်ပါခင်များး Review Credit to Everdean Aurora ရုပ်ရှင်ကားကို ထက်ထက်တင်ဇာ က ဘာသာပြန်ပေးထားပြီး သစ်ဆန်းခန့် မှ Encode ပေးထားပါတယ် zawgyi Megamind႐ုပ္ရွင္ကားက ကြၽန္ေတာ္တို႔အကုန္သိၾကတဲ့ Dreamworks Creationေတြထဲက အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးလက္ရာတစ္ခုဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ Dreamworks Studioက Shrekဆိုတဲ့ အေကာင္းဆုံး animationကိုထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သလို ...
Insidious (2010) အေးချမ်းသာယာနေတဲ့ မိသားစုလေးဟာ အိမ်အသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလာခဲ့တယ်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဂျော့ချ် တို့ လင်မယား ရယ် ကလေး ၃ ယောက်ရယ်ပေါ့တစ်နေ့မှာတော့ အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူ ဒေါလ်တွန် တစ်ယောက်အိပ်နေစဉ် အချိန်တွေမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို မြင်နိုင်ခဲ့ပြီးထို မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလဲ လူ့လောက ကို ကူးလာဖို့အတွက်ဒေါလ်တွန် ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို လိုချင်တဲ့အတွက် မိသားစု ကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးပါတော့တယ်တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ ရလုဆဲဆဲ အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ပရလောက ကို မယုံတဲ့ ဂျော့ချ် ဟာ ပရလောက နှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သောအဲလိစ် ကို ခေါ်ဆောင်ပြီး သားဖြစ်သူ ဒေါလ်တွန် ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စကို ကူညီခိုင်းခဲ့သော အခါ...ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ May Thazin Soe ဖြစ်ပြီးThit San Khant မှ Encode ပေးထားပါတယ်
Hello Ghost (2010) Hello Ghost (2010)==============IMDb Rating - 7.6/10#Unicodeဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ comedy,drama အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်နေတဲ့ ကင်ဆန်မင် ၊ ငယ်ငယ်ကတည်းဆွေမရှိ မျိုးမရှိတစ်ကောင်ကြွက် ၊ မျက်နှာငယ်ဘဝနဲ့လူအထင်သေးမခံချင်လို့ ငယ်ငယ်ကတည်းကအလုပ်တွေအရမ်းကြိုးစားပြီးပိုက်ဆံတွေရှာတယ် ၊ ဒါပေမယ့်သူ့ဘဝရည်မှန်းချက်မရှိရယ် ၊ သူလိုချင်ခဲ့တာမိသားစုမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးမရခဲ့တာရယ်ကြောင့် လူဘဝကိုစိတ်နာပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြိမ်ကြိမ်သတ်သေခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးသောက်ပြီးသတ်သေတယ်ဒါပေမယ့် မသေခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှတော့မှာတံတားပေါ်ကနေခုန်ချပြီးသတ်သေခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် တံတားအောက်မှာကယ်ဆယ်ရေးတွေရှိနေတာကြောင့် သူ့ကိုကယ်ခဲ့ပါတယ် ၊ နောက်ဆုံးသူ့ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာအောင် ဆရာဝန်တွေကြိုးစားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်ပြန်နိုးလာတော့ သူ့မှာအထူးအဆန်းတွေဖြစ်ပါတော့တယ် ၊ ဆေးရုံမှာ သရဲဝိဉာဉ်လေးကောင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီသရဲလေးကောင်ဟာသူသွားနေရာတောက်လျှောက်လိုက်တယ်။ သူ့ကိုအနှောင့်အယှက်တွေပေးတယ် ၊ အဲ့ဒါနဲ့ကင်ဆန်မင်ဟာ နတ်ဆရာတစ်ယောက်ဆီသွားပြီးအကူအညီတောင်းတယ် ၊ နတ်ဆရာက မင်းသရဲတွေကိုမြင်နေရတာက သူတို့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းခိုင်းဖို့၊ သူတို့ဆန္ဒပြည့်သွားတာနဲ့ မင်းဆီကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် ၊ ဒီလိုနဲ့ ကင်ဆန်မင်တစ်ယောက် သရဲလေးကောင်ရဲ့ ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Tin Myo Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်။) #Zawgyiဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ comedy,drama အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်နေတဲ့ ...
Tangled 2010 ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက နေ‌ရောင်ခြည်လေးတစ်စက်ဟာ ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ လူ့ပြည်ကိုကျလာခဲ့ဖူးသတဲ့ အဲ့ဒီနေစက်လေးကနေ မှော်ဝင်ရွှေရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖူးပွင့်ခဲ့ပြီ သူ့မှာ ဖျားနာ ဒဏ်ရာ နာကျင်မူတွေကိုကုသပေးနိုင်စွမ်းရှိလေသတဲ့ .... ပြူတင်းပေါက်လေးနေ ဟိုးအဝေးကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေ... ဘယ်ဆီကိုမှန်မသိ မှန်းမျှော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ.. အခုတော့ ရည်ရွယ်ရာဆီရောက်ခဲ့ပြီ.. မြူမှုန်တွေ ပင့်တင်လိုက်သလို.. အလင်းရောင်ကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီလေ... ကောင်မလေးက- အမ်မက်တစ်ခုကို လိုလားတောင့်တခဲ့ပြီး အဲ့ဒီတစ်ခုအတွက်ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းရင်း တစ်နေ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကော ပျော်ရွှင်ရပါ့မလား မျှော်မှန်းထားသလိုကော ဖြစ်လာပါ့မလား ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကော အဲ့ဒါပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ လို့မေးတဲ့အခါ ကောင်လေးက- အဲ့ဒီအတွက် ကောင်းကွက်ကတော့ မင်းနောက်အိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်လို့ရပြီပေါ့... ငါ့ရဲ့အိမ်မက်အသစ်ကတော့ မင်းပါပဲ... အိုကေ Tangled ဆိုတာ 2010 တည်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Animation Movie တစ်ခုပါ။ ဆံပင်ရှည်ကောင်မလေး နဲ့သူခိုးလေးတစ်ယောက်တို့ရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပေါ့ ဇတ်ကွက် အလှည့်အပြောင်းလေးတွေကတော့အားလုံး အလွတ်တောင်ရနေလောက်ပါပြီ။ ဒီဇတ်ကားလေးကို ဖန်များအကြည်ပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ဟိုးတစ်ချိန်က ဆံပင်ရှည်နဲ့ကောင်မ‌လေးဇတ်ကားကို ပြန်ခံစားနိုင်ဖို့ ချန်နယ်မြန်မာကနေ တစ်ဖန်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇတ်ကားက Musical Animation တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဇတ်ကားထဲကသီချင်းများကိုလဲ အတတ်နိုင်ဆုံး မူရင်းအရသာမပျက်အောင် ဘာသာပြန်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ "I See the Light" သီချင်းနဲ့ 54th Grammy Awards နဲ့ Best Song Awards ဆုတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Nominated များစွာဝင်ခဲ့ပြီး ဇတ်လမ်းတို Tangled Ever After ကို 2012 မှာထပ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ...
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010) Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore (2010)==================================IMDb Rating - 5.3/10#Unicode“My name is Bond..James Bond” လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးလူဆိုးတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ အထူးအေးဂျင့်ကြီးကိုပြေးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီကားလေးကတော့James Bondလိုမျိုး နည်းပညာကို သုံးပြီး လူဆိုးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကားလေးတစ်ကားပါပဲ။ အဲ James Bond နဲ့မတူတာက ဒီကားလေးထဲက အထူးအေးဂျင့်လေးတွေက ခွေးလေးကြောင်လေးတွေဖြစ်နေတာပါ။ ခွေးတွေကိုအပြတ်ရှင်းပြီး လူသားတွေကိုအုပ်ချုပ်ချင်နေတဲ့ ကြောင်ဆိုးမလေး ကစ်တီဂလိုရီကို ခွေးအေးဂျင့်တွေဖြစ်တဲ့ ဒစ်ဂ် ၊ ဘတ်ချ်၊ ကြောင်အေးဂျင့်မလေး ကတ်သရင်းတို့နဲ့ရူးကြောင်ကြောင်ခိုလေး ရှိန်းမက်စ်တို့ အတူပူးပေါင်းဖော်ထုတ်တားဆီးကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်လေးတွေရဲ့စွန့်စားခန်းဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ။ နောက်ပြီးတော့ ၂၀၁၀ ကထွက်ခဲ့တဲ့ ကားလေးဆိုတော့ ၂၀၁၀တုန်းကအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်တွေးရင်း အေးအေးဆေးဆေးကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Chit Tee ပဲဖြစ်ပါတယ်။) #Zawgyi“My name is Bond..James Bond” ...
Salt (2010) Salt (2010)=========IMDb Rating - 6.4/10#Unicode2010 မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Action, Mystery, Thriller ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် အချောစား အလန်းစား Angelina Jolie ဖြစ်ပြီး IMDB 6.4/10 ရရှိထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အယ်ဗလင်းဆော့တ်က အမေရိကန် စီအိုင်အေ အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ အရည်အချင်းကို အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမ မြောက်ကိုရီးယားမှာ အဖမ်းခံရတုန်းက လာကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဂျာမန်လူမျိုး ပင့်ကူမုဆိုး မိုက်ခ်နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ဆီကို ရရှားတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဆော့တ်ဟာ ရရှားသူလျှိုတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆော့တ်တစ်ယောက် ထွက်ပြေးရတော့ပါတယ်။ မိုက်ခ်လည်း ပျောက်နေပါပြီ။သူ တကယ်ရရှားသူလျှိုဟုတ်မဟုတ် မိုက်ခ်နဲ့ပြန်ဆုံမလားဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါဦး။၂၀၁၀ မှာထွက်ရှိထားပြီ။ မတင်ရသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးမို့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ May Myat Thu ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyi2010 မွာ ထြက္ခဲ့တဲ့ Action, ...